Gems Hidden EYurophu nendlela Fumana Kukhona ngetreyini | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Gems Hidden EYurophu nendlela Fumana Kukhona ngetreyini
bonke abakhenkethi baphupha malunga nokutyelela ubuncwane obufihliweyo eYurophu kunye nezixeko eziphambili zaseYurophu. A ifoto kubo ngovuyo ndimi ecaleni kwe-Eiffel Tower, Colosseum okanye Big Ben yenza wonke umntu azive ezingaqhelekanga (kwaye ngokupheleleyo ukufumana ukuba!). Enoba wena i Instagram odla okanye "oyinyaniso" umhambi, iindawo nisijikeleze ihlabathi yonke!
bebehamba, ngeyakho ayaziwa, ukuzama ukuhlangabezana iinkcubeko ezintsha, kunye namava into eyahlukileyo intle. Yiloo nto abahambi wokwenene kungekhona esaba ukuya off indlela. Bayathanda ukuyeka ngenxa needolophu kaninzi abanalo izikhululo zeenqwelo-moya musa uzobe iindwendwe ezininzi. Ezi ubuncwane obufihliweyo eYurophu amaninzi kakhulu ukunika umfanekiso olungcono kwilizwe elithile yaseYurophu ngaphezu kwayo nantoni na, a ukuqonda kwesizwe. Ukutyelela kubo ngololiwe yeyona ndlela ibhetele ukunandipha ezintsha zezwe kwaye uhamba yokuphila. Ukuba umhambi, olu luhlu wena.
Nazi GEMS esizithandayo efihliweyo eYurophu lula onokulufikelela ngololiwe oko ngaphandle kwamathandabuzo Loxwebhu.
PHAWULA: Ukuba ucinga malunga ehamba ngebhasi xa kuthelekiswa ngokuya ngololiwe – ukhetho kufuneka kusoloko ngololiwe.
1. Saxony, i zesitayela Mix of Nature and History kwaye ukhetho lwethu lokuqala Hidden Gems In EYurophu
Akukho mfuneko yokuba iprojekthi kwangoko engqondweni ngokwakho ukuba Dresden, ngempela. Dresden i ikomkhulu Saxony, kodwa kukho ezinye iindawo zeli kummandla wasempumalanga German ekubalulekileyo ukuzikhankanya, kakhulu. Nje ngaphandle Dresden nguye Konigstein Fortress. Kwaye ukuba uyayonwabela uhamba, kufuneka akakuphosi iibhulorho ayekade kwi Saxony Ipaki yelizwe. Ngaphezu, kufuneka sinyaniseke ngokwakho. Kunzima ukuba tyelela Germany yaye, okungenani kanye, ukuba baninzi kakhulu Beers kwamanye imivalo. Ngethamsanqa, Saxony has a kwidolophu Spa encinane ebizwa Bad Schandau, ilungele detoxing emva ebusuku onxilileyo. Gluhwein kufuneka kwakhona ibe kuluhlu lwakho ukususela ulikhaya imarike endala Christmas e Germany. the lenethiwekhi German elibalaseleyo kule ndawo ukuze uya kufumana ngayo ngokupheleleyo.
Frankfurt ku Dresden Uqeqesha
Dortmund ku Dresden Uqeqesha
Luxembourg ku Dresden Uqeqesha
Amsterdam Dresden Uqeqesha
Into yokuqala ucinga xa ethetha Luxembourg ukuba iibhanki. Ilizwe yaziwa kakuhle ncam ngenxa yabo. Kodwa Luxembourg ke steepled amabandla, izindlu ngamatshe, kwaye imijelo emincinci yenza ukutyelela kuyo kube mnandi ngakumbi kunokuba ubulindele. Yiyo loo nto kule ndawo ngomnye ubuncwane obufihliweyo ezinqabileyo eYurophu phakathi kweentsika le yelizwekazi. Yi indawo enhle, wayibeka kwindawo apho kudibana khona Petrusse and Alzette nemilambo. Ungatyelela ezinye zokutyela kunye imivalo hip kufuphi kwebhokisi central. Ngaphezu, nokwayo Philippe II iye iqelana iivenkile, ukuze ube ukulungele ukuchitha inyuku ezimbalwa engcono! bebonke Laksembheg yindawo ngogqibeleleyo ukuze romantic impela-veki.
Koblenz ku Luxembourg Uqeqesha
3. Antwerp: diamonds, Happy kunye Beer More
Kanye emveni kokuninzi, neze into gem efihlakeleyo, kodwa kwakufuneka ukukhankanya kuyo. Isizathu ilula. Antwerp yindawo enkulu bedlula kwi yakho uhambo ngololiwe ukusuka Luxembourg ukuya eNetherlands. ngaphandle, esi sixeko a lot ukunikela, kwaye kufuneka konwaba khona. Ukuba inempilo okujikeleza yokwakha kufuneka uthathe i "uhambo bokwakha." Ngenxa yale mephu cool, Unga fumanisa amagqabantshintshi emzini kwifomu yakho oyithandayo yokuthutha. Yaye ukuba ukhetha into "shinier", hamba khangela Antwerp Home of Diamonds. Ngaxeshanye, Belgium mkhulu kubathandi beer. Ngaphandle ungomnye, Uthatha imagi kwi "De Konick", i Antwerp utshwala isixeko.
4. Camogli, a True Hidden Amagugu eYurophu
kuphela 45 imizuzu lukaloliwe ukhwele kude Genoa, le dolophu Abalobi encinane ayinalo eninzi kufanele-ubona. kunjalo, kakhulu ezifana aiindawo derrated ukuba baguquke kuba GEMS efihliweyo kunjalo eYurophu, nakulena ifanele ibe kuluhlu lwakho. Kunye nezindlu zawo bala kunye nezitalato amawa, Camogli yindawo egqibeleleyo ukuya uhambo olude. Ukuhamba nge Camogli, uyaqaphela kwiihotele kwephepha, izakhiwo ezindala, kunye kubhakwa ezincinane. Phambi kokuba uyazi ukuba – uya kuwa uthando nale ndawo! Kwaye xa Masingadinwa behamba, akukho nto ilunge ngaphezu kokuba sasemini kwezinye zokudla le dolophu. A ixesha ogqibeleleyo ukutyelela Camogli wayeza kuba May, phakathi fish festival. Nokutsala iphambili yale siganeko nowezojiweyo ngepani ton-28. Oku kusetyenziswa, wena ukuyichaza ngqo, kweentlanzi ukupheka.
UFlorence Camogli Uqeqesha
Genoa ukuba Camogli Uqeqesha
ERoma ukuze Camogli Uqeqesha
EMilan ukuya Camogli Uqeqesha
5. Weymouth, a Beach Idolophu e England uvale kuluhlu lwethu lwe Hidden Gems In EYurophu
Kunzima ukuba kuqwalaselwa enye ubuncwane obufihliweyo eYurophu xa unayo idayinaso amatye kufutshane nawe. Ewe, ulifunda ngqo. Dinosaur iifosili ingafunyanwa kunxweme സോഫ്റ്റ്വെയര് isoftwe ye Weymouth. kodwa, abantu abaninzi ukuthatha isigqibo sokuba iyure-3 ride evela London train ukubabona. Baye abo benza banokuba eyahlukileyo watersports yaye fish and chips elunxwemeni. Okanye ukhetha i isidlo ezinye gastropubs. Ekubeni wesikiti phantsi kancinane ngalo mzuzu, lixesha elifanelekileyo ukwenza uhambo eNgilani. Kwaye ixesha elifanelekileyo lokundwendwela i-Weymouth iya kuba ngu-Agasti ngexesha le-Weymouth zomkhosi.
Ngaba siya uncedo isigqibo apho ukutyelela elilandelayo kwi adventures zakho oluzayo? Kulungile! Ezi zindawo abahlanu umzekelo nje ukuba kukho nangoku ezinye ubuncwane eyay ezifihlakeleyo eYurophu. Ihlabathi lizele izimanga elinde ukuba uzibone. Ehamba ngololiwe uya kukunika ithuba ukuze ubone ezi iindawo kwinkalo eyahlukileyo. kwakhona, uya kunandipha uhambo lwakho. Ukuba udinga ukunceda uhlela uhambo lwakho, okanye ufuna ukuba bathenge amatikiti, nceda sityelele apha SaveATrain.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye okubhaliweyo kwaye sinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhidden-gems-europe%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
#Camogli #hiddemgems #Saxony #weymouth Antwerp europetrains europetravel Laksembheg tips zokuhamba train